Ngokushesha, ngo-Ephreli 24, eMoscow, omunye wemicimbi enkulu kunazo zonke eRussia - umkhosi "Izinkathi ZaseRussia". Umcimbi, oqoqa minyaka yonke cishe zonke izibalo eziyinhloko zemfashini yaseRussia, uzovakashelwa kulo nyaka ngu: Ksenia Chilingarova, Natalia Turovnikova, Denis Simachev, uYevgenia Linovich, uLududlala Norsoyan, uTatyana Mikhalkova, u-Olga Vilshhenko nabanye abaqeqeshiwe embonini yezemfashini. Ngosuku lokuqala lomkhosi, bazohlangana ebhokisini lebhola lehhotela le-Four Seasons eMoscow etafuleni elizungezile elizinikezelwe isihloko sokungena kwamagugu amasiko aseRussia emfashini wanamuhla.
Abaqeqeshi bemfashini yaseRussia bazoxoxa ngama-nuances e-"isihloko seRashiya" esilinganisweni sembonini yezemfashini yomhlaba jikelele, izici zokuhweba nezokuthengisa zezimpawu zokuthengisa ezikhethekile ngalesi sihloko, kanye nezinkinga zokuvuselela nokugcinwa kwemisebenzi yobuzwe baseRussia njengomthombo wokuzikhethela okukhethekile kwefashini yaseRashiya.
I-ballet yaseRashiya, izintombi zabantu, i-folklore eyingqayizivele isivele ibonakala "imikhiqizo" enamandla amakhulu okuthuthukiswa. Futhi izoboniswa ngempumelelo ngembukiso, evuleka ngo-Ephreli 28 kulegalari "Isikhathi seFashion". Lo mbukiso uzoba yizimpawu zomkhiqizo odumile waseMarusya, iqoqo lokugcina le-Masterpeace Jardin Oriental, imifanekiso emihle kakhulu yaseVilshenko, umsebenzi wabenzi bezintambo ze-Yelets, ama-shawls asePavlovsky Posad nase-Orenburg, i-Khokhloma nezinye izinto eziyingqayizivele. Futhi lo mkhosi, ozobamba izenzakalo eziningi ezithakazelisayo, uzohlala kuze kube ngoMeyi 13.
I-Burberry Prorsum Resort 2016 Iqoqo
Isitayela lempi emisebenzini yama-couturiers aseRussia
UMnuz Brandoni uzokhiqiza izingubo zezingane
Embukisweni weChanel Metiers d'Art kusukela kunani elimangalisayo lezinkanyezi eziphuphuthekiswe amehlo
Impumelelo kaVictoria Beckham kwiSonto leMfashini eNew York
I-indoor plant i-kalateia
Ama-pancake e-Orange ne-ricotta
Indlela yokupheka i-squid isaladi ukuze ithambile futhi ithenda
Umlingiswa wombala wezingubo zokugeza
USergei Svetlakov wanikezela ama-ruble ayizigidi ezingu-30 zendlu e-Sochi
Kunokuba impilo yokuphila iyingozi
Indlela yokuba umuntu omuhle kwabanye
Indlela yokupheka inyama enomnandi nomuncu ngesiShayina, iresiphi yoNyaka Omusha ngesithombe
Ukudla okucebile fiber yemifino